တန့်ယန်းမြို့နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
တန့်ယန်းမြို့နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း၊ လားရှိုးခရိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသော မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တန့်ယန်းသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ပန်လုံပျက်ဆီးခဲ့ပြီးနောက် ပန်းသေးတရုတ်(ယူနန်မှလာသော အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ တရုတ်များ)တို့၏အဓိကအခြေချရာ ဒေသတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကိုဩဒိနိတ်: 22°29′0″N 98°23′0″E﻿ / ﻿22.48333°N 98.38333°E﻿ / 22.48333; 98.38333
၃၁၀၀ ပေ (၉၄၅ မီတာ)
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် သောင်းကျန်းသူ SSA တို့ကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တပ်မတော်သည် ဒေသခံပြည်သူ့စစ်များကို SSA ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်နိုင်စေရန်အတွက် တပ်ဖြန့်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သောတိုက်ပွဲများတွင် SSA သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့သည် မြန်မာတပ်မတော်က ဓာတုလက်နက်များကိုသုံးစွဲခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများကိုလည်း အတင်းအဓမ္မ ပေါ်တာဆွဲခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ကျောင်းဆရာမအချို့လည်း အသတ်ခံခဲ့ရသည်။
၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့မှစတင်ကာ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် တပ်ရင်း ၂၀ ခန့်ကိုဖွဲ့စည်းပြီး ကြီးမားသောထိုးစစ်ဆင်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တပ်မတော်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ မိုင်းနောင်မြို့နယ်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်နှင့် တန့်ယန်းမြို့နယ်တို့အား ငြိမ်းချမ်းသောနယ်မြေများအဖြစ် ဖန်တီးလို၍ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သည် အမြှောက်ကြီးများ၊ တိုက်လေယာဉ်များနှင့် ရဟတ်ယာဉ်များကို အသုံးပြု၍ အထောက်အပံ့ပေးခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲများကြောင့် ရှမ်းလူမျိုး၊ ပလောင်လူမျိုး၊ လားဟူလူမျိုးနှင့် လီဆူးလူမျိုး တစ်ထောင်ခန့် တိုက်ပွဲမှ လွတ်ကင်းရာသို့ နေရာရွေ့ပြောင်းခဲ့မှုများရှိခဲ့ပြီး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပြဿနာများ မြှင့်တက်လာခဲ့သည်။ 
↑ (မေ ၂၀၁၅) သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ, ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ အတွဲ-၂. နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန, ၆၄။
↑ Forbes, Andrew ; Henley, David (2011). Traders of the Golden Triangle. Chiang Mai: Cognoscenti Books. ASIN: B006GMID5
↑ Militia men from battlefields deserting. Shanland.org (19 May 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Junta army employs more militias against Shan rebels. Shanland.org (16 May 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Being honest about using CW. Shanland.org (7 June 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Junta army has women porters lead the way in war zone. Shanland.org (22 April 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ More killing by unidentified cutthroats reported. Shanland.org (21 April 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Villagers in war zone killed by unidentified cutthroats. Shanland.org (19 April 2011). Retrieved on9September 2011.
↑ Govt invasion of Shan state mocks ceasefire pact- Bangkok Post
↑ Attacks in central Shan State
ဤ ရှမ်းပြည်နယ် ပထဝီဝင်တည်နေရာ ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တန့်ယန်းမြို့နယ်&oldid=395969" မှ ရယူရန်
၂ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၈:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၈:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။